atlantika tanàna casino mbola misokatra
wow mistweaver monk tsara indrindra ao slot
Fotsiny isika ny mangataka ho an'ny olona rehetra ny faharetana nandritra ny fanorenana vanim-potoana". Dotty ny mampiasa 1000 mpiasa statewide, miaraka amin'ny maro an'isa any amin'ny faritra Atsimon'i Nevada.
Ny fivarotana dia ahitana ihany koa ny 21 hektara manerana ny arabe atlantika tanàna casino ivelan'ny trano fisakafoana. 23 mba hametraka vaovao slot milina sy ny casino fitantanana/mpilalao valisoa rafitra ampiasaina amin'ny Dotty ny tranombahiny atlantika tanàna casino mbola misokatra. Tamin'ny 2011, ny Nevada Lalao ny Vaomiera nasiam-panitsiana ny fitsipika mifehy ny tranombahiny, mitaky Dotty sy mitovy orinasa madinika amin'ny lalao manana sivy-pitsarana fisotroana, ny 2000 metatra tongotry ny toerana ho an'ny daholobe sy ny lakozia miasa farafaharatsiny ny antsasaky ny fotoana ny raharaham-barotra dia misokatra wow macro mampiasa trinket slot 2. Hacienda mpiasa maintsy reapply noho ny asa na hampiharana ny iray hafa, asa ao anatin'ny orinasa, Michael Eide, lohan ' ny manamboninahitra miasa ny Nevadaa Hotely fisakafoana ny Asa, dia hoy ny zoma. Ny casino dia nisokatra indray tamin'ny Desambra wow mistweaver monk tsara indrindra ao slot. Eide hoy ny casino afaka miasa hatramin'ny 380 slot milina. Ny 250 ny mpiasa ao ny Hacienda nomena 60-andro zavamaniry famaranana ny manamarika eo ambany ny Mpiasa Fanitsiana sy Hanabeazana Fampahafantarana Fihetsika ny volana oktobra ny fananana ny ela-mba ho tompony teo aloha.
Ny Hacienda ahitana 19,000 tongony toradroa ny lalao toerana, ny fivoriana foto-drafitrasa, ny fanomezana ny toeram-pivarotana sy ny sarimihetsika teatra. "Fa tsy fanakatonana tanteraka ny enim-bolana, hamolavola, dia miasa amin'ny voafetra fototra raha niara-fanavaozana," Estey hoy ny fanambarana.